Yaw Net Than: 2010
ခုတလော ကန်းထရီး သီချင်းတွေ နားထောင်ရင်း နားထောင်ရင်းနဲ့ Folk သီချင်းတွေဘက်ရောက်သွားတယ်။ ဝိုင်းအသစ်တွေထဲက Fleet Foxes ကိုကြိုက်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ သီချင်းနှစ်ပုဒ်ပါ။ နားဆင်ကြည့်ပါဉီး။ သူတို့ စတိုင်ကို ကြိုက်ရင် Bon Iver နဲ့ Ray LaMontagne တို့ကိုလည်းကြိုက်လောက်ပါတယ်။
Posted by ယောနက်သန် at 2:57 PM 1 comments
Labels: သီချင်း ဂီတ
At the crossroads:adialogue with Aung San Suu Kyi
ဒီဇင်္ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့က LSE တက္ကသိုလ်မှာ Aljazeera နဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ ပူးပေါင်းပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည် နဲ့ တိုက်ရိုက်မေးမြန်းဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများ၊ မကြည့်ရသေးသော သူများ အတွက် ရှယ်လိုက်ပါတယ်။
Posted by ယောနက်သန် at 8:59 PM2comments
Posted by ယောနက်သန် at 3:05 PM 1 comments
Posted by ယောနက်သန် at 2:56 PM0comments
JFK ရဲ့မိန့်ခွန်းမှ ကောက်နှုတ်ချက်
Inaugural Address, January 20th 1961
"ငါ့အတွက် တိုင်းပြည်က ဘာလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲလို့ မမေးကြပါနဲ့၊ တိုင်းပြည်အတွက် ငါက ဘာလုက်ပေးနိုင်မှာလဲလို့သာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးကြည့်ကြပါ"
မှတ်ချက်။ ။ ဘာသာပြန်ကို မရွှေစင်ဦး ဘလော့တွင် တင်ထားသော မောင်ပေါ်ထွန်း ဘာသာပြန်သည့် ကမ္ဘာရန် မှကူးယူဖေါ်ပြ။
Posted by ယောနက်သန် at 6:46 AM3comments
သတ္တဝါတွေထဲမှာ လူဟာ ဉာဏ်ရည်အမြင့်ဆုံး...
ဆိုပြီး နေထိုင် စဉ်းစား ကြီးပြင်း တွေးတော တီထွင် တိုးတက် ခမ်းနား
ကမ္ဘာကြီးဟာ ကြုံ့လာခဲ့ အချို့နေရာတွေအတွက်တော့ ပိုမိုဆန့်ထွက်ရှည်လျားနေဆဲပဲ
အသုံးအဆောင် ပစ္စည်း နည်းပညာတွေနဲ့အတူ လောဘလည်း တိုးပွားလာခဲ့
ကမ္ဘာ့ငွေကြေး အကြပ်အတည်း၊ ယူရိုငွေကြေးစနစ်ပြိုကွဲတော့မှာလား
ဘာသာရေး အစွန်းရောက်အဖွဲ့ကွန်ယက်တွေကတော့ ခိုင်မြဲနေတုန်းဘဲ
ရုရှားမှာတောမီးကြောင့် ဂျုံစိုက်ခင်းတွေ ပျက်စီး၊ နောက် ပါကစ္စတန်မှာပါရေကြီးစေတယ်
ကိုရီးယာ တောင် နဲ့ မြောက် တဖက်နဲ့တဖက် ပစ်ခတ်ကြ
ဒါဟာ အရှေ့ နဲ့ အနောက် အတွက်အစလား
ကြီးထွားလာတဲ့ တရုတ်အတွက် အင်အားပြဖို့ အကွက်လား
ကမ္ဘာကြီးဟာ နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်လာ နေပြီ/မှာ လား
လှိုက်စားနေတဲ့ လူမူ့အဖွဲ့အစည်းလား။ ။
Posted by ယောနက်သန် at 2:38 PM2comments
ဘာလဲ တော်လှန်ရေး။ အကြမ်း ပတမ်း လုပ်တာတိုင်း တော်လှန်ရေးလား။ မဟုတ်ဘူး။ အဖျက်လုပ်ငန်းဆိုတာတိုင်း တော်လှန်ရေးလား။ မဟုတ်ဘူး။ လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လို့ရသလား။ မဟုတ်ဘူး။ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လဲ။ ဘယ်လိုလဲ၊ လဲ လဲ လဲ။ အဲဒီလို “လဲ” တွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားကြစို့။ တရံရောအခါက ဒီမေးခွန်းကို ကျွန်တော်ဒီလို ဖြေခဲ့တယ်။
Revolution is direct participation of masses themselves to shape their own destiny fundamentally by all possible means; historically inevitable and necessary, and inadmissible of all forms of dry schematisation unrelated to given historical conditions, and of blind, negative, spontaneous, destructive character; and therefore creative in the highest degree. Its fundamental objective is the emencipation of all toiler; its basis mass participation, its guarantee of victory mass consciousness. (in other words, the digree to which the toiling mass is organised and thus conscious of its role and power.)
တော်လှန်ရေး ဆိုတာ လူထုက လူထုရဲ့ ကံကြမ္မာကို အခြေခံကနေပြီး ဖန်တီးရာမှာ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီး လူထုကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ရာဇဝင်ကြောင်း အရ မလွှဲမရှောင်သာလို့လဲ လိုတယ်။ ဖြစ်ပျက်ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ရာဇဝင်အခြေအနေ အချက်အလက်တွေနဲ့ အခြားတလမ်းဖြစ်တဲ့ အခြောက်တိုက် စိတ်ကူးစီမံကိန်းမျိုးနဲ့တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ပြီးတော့ မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး အကန်းလို ရမ်းလို့မဖြစ်ဘူး။ တဖက်တွင်သာ လုပ်တဲ့အလုပ်၊ အလိုအလျောက် လူထုထကြွမူ အလုပ်ကိုလဲ လက်မခံနိုင်ဘူး။ အဲဒါတွေကြောင့် တော်လှန်ရေးဆိုတာ အကြီးအကျယ်ဆုံး ပြုပြင်ဖန်တီးတတ်တဲ့ သတ္တိရှိပါတယ်။ တော်လှန်ရေးရဲ့ အခြေခံ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကတော့ လုပ်စားကိုင်စား လူထုကြီး လွတ်လပ်မူဖြစ်ပါတယ်။ တော်လှန်ရေးရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ကတော့ လူထုပါဝင်အောင် ဆောင်ရွက်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့ အခြေခံကတော့ လူထုကြီးရဲ့ နိုးကြားထကြွမူ တနည်းအားဖြင့် လူထုကြီးဟာ ဘယ်အထိ ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းစည်း ရှိလို့ ဘယ်အထိ မိမိရဲ့ တာဝန်နဲ့ တန်ခိုး အာဏာကို သိရှိ နားလည် နိုးကြားသလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ တည်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကျွန်တော်ဖြေခဲ့တယ်။
၁၉ မေ ၁၉၄၇ နေ့တွင် ဂျူဗလီဟော ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ပဏာမပြင်ဆင်မူ ညီလာခံတွင် မိန့်ကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းမှ။
Posted by ယောနက်သန် at 9:00 AM3comments
Posted by ယောနက်သန် at 1:25 PM6comments
အခုတလော စာမရေးဖြစ်ပါ။ အလုပ်များတာက ဘောပွဲကြည့်ရ၊ Glastonbury ပွဲကြည့်ရ နဲ့မို့ မအားဖြစ်နေတာ။ Guns N' Roses မှာ Lead ဂစ်တာ တီးခဲ့ဖူးတဲ့ Slash လည်း လာပြီးတီးသွားပါတယ်။ သူ့လက်သံ နားထောင်လိုသူတွေ အတွက် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ Paradise City လည်းတီးသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် Embed လုပ်ဖို့အတွက် ကုဒ် က ဒီတပုဒ်ပဲ ရှိတယ်။
Posted by ယောနက်သန် at 3:06 PM4comments
အဓိက ကတော့ ရေရှာပါးလာခြင်းသည် လယ်၊ယာ စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကောင်းစွာစီမံ ခန့်ခွဲ မူဖြင့်သာ ကူညီနိုင်လိမ့်မည်။
စိန်လိုရတနာ အတွက် လူတွေ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် သတ်ဖြတ်တတ်ကြသလို နိုင်ငံတွေဟာလည်း ရေနံအတွက် စစ်တိုက်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာ သောက်သုံးရေ မရှိတော့ရင်ဖြင့် ဘာမှတန်ဖိုး မရှိတော့ပါဘူး။ အသက်ရှင် နေထိုင်နိုင်ဖို့ အတွက် ရေကောင်းရေသန့် လိုအပ်ပြီး ဘာနဲ့မှလည်း အစားထိုလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ အများအားဖြင့် ဈေးနူန်းသတ်မှတ် မထားပေမယ့် ရေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တန်ဖိုးအရှိဆုံး အရာပါ။
သဘာဝတရား က သူပေးနိုင်မယ့် ရေပမာဏကို ပိုင်းခြား သတ်မှတ်ပြီးသားပါ။ ရေလိုအပ်မူ ပမာဏ ကြီးထွားလာမူ ကို တားဆီးလို့ မရတာက ကမ္ဘာ့လူဦးရေတိုးပွားမူ နဲ့ အတူ မြင့်တက်လာတဲ့ လူ့နေထိုင်မူ အဆင့်အတန်း ကြောင့်ပါဘဲ။ လူနေအိမ်၊ စက်ရုံ နဲ့ ရုံးခန်း တွေက ရေကို ပိုမိုစုပ်ယူ သုံးစွဲလာပါတယ်။ အစားအသောက် ဖြစ်တဲ့ အသားနဲ့အသီးအနှံ ကို စိုက်ပျိုးထုပ်လုပ်ရာမှာ ရေကအဓိက ဖြစ်ပြီး အစားအသောက် လိုအပ်မူ မြင့်တက်ကြီးထွားလာတာ ကလည်း အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာပါ။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း တခုတည်းကပဲ ရေပမာဏ ၇၀% ကို ထုတ်ယူသုံးစွဲ နေရပါတယ်။
သီးနှံစိုက်ပျိုး တဲ့နေရာတွေကိုဖြတ်ပြီး တစ်ဆယ့်နှစ်ရာသီပတ်လုံး ပင်လယ်ဆီကို စီးဆင်းနိုင်တဲ့ မြစ်ဆိုလို့ ကမ္ဘာ့မြစ်ကြီးတွေထဲမှာ အနည်းငယ်ပဲ ရှိပြီး အဲဒီမြစ်တွေရဲ့ စီးဆင်းတဲ့ ရေပမာဏဟာလည်း နည်းပါးလာနေပါတယ်။ သိသာမြင်သာ မူနည်းပေမယ့် သေသေချာချာ ပြောကြမယ်ဆိုရင် ပကတိမျက်စေ့နဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့မြေထုအောက်မှာ ရှိတဲ့ ရေအရင်းအမြစ် ထုတ်ယူ သုံးစွဲမူအကြောင်း ပြောရမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီလို ထုတ်ယူသုံးစွဲမူကြောင့် ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အားကို ကြီးစွာအပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မြေထုအောက်မှာ ရှိတဲ့ ရေအရင်းအမြစ်တွေကို အာကာသ မှာရှိတဲ့ NASA ကဂြိုလ်တု တွေကတဆင့် ကြည့်ရှုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နိုင်ငံ အပါအဝင် နေရာတော်တော်များများ မှာ ကမ္ဘာမြေအောက်က ရေမျက်နှာပြင်(water table) ကျဆင်းနေပါတယ်။
အခုထိတော့ ရေကြောင့် ဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲရယ်လို့ ကမ္ဘာမှာမရှိသေးပေမယ့် Darfur မှာဖြစ်နေတဲ့ ရန်စောင်မူတွေက စစ်ပွဲဆီကို ဦးတည်နေပါတယ်။ ရေရဖို့အတွက် တဖွဲ့ နဲ့ တဖွဲ့ အပြိုင်အဆိုင် ဦးကြသလို ရန်လည်းစောင်တတ်ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ၆၀% ထက်ပိုတဲ့ လူတွေဟာ မြစ်ဝှမ်းတခုမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြပြီး အဲဒီမြစ်ဝှမ်းကို နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ ဒါမှမဟုတ် နှစ်နိုင်ငံထက် ပိုတဲ့ နိုင်ငံတွေက မှီခိုအားထား နေရလို့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာ မဆန်းပါဘူး။ တကယ်လို့ ရေမလုံလောက်မူ ပြဿနာဟာ နိုင်ငံတစ်ခု တည်းအတွင်းမှာ ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင် ပြောကြပါစို့ အိန္ဒိယ ဒါမှမဟုတ် တရုတ်ပြည် မှာ ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင် အဲဒီပြဿနာကြောင့် လူတွေအစုလိုက် အပြုံလိုက် ရွှေ့ပြောင်းမူတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမူတွေလည်း ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
လူတွေအနေနဲ့ ရေအရင်းအမြစ် ရဲ့ ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ပမာဏကို ကြီးမားလာအောင် လုပ်လို့မရပေမယ့် နည်းလမ်းလေးသွယ် နဲ့ အကျိုးရှိရာရှိကြောင်း ဖြစ်အောင် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ ပထမနည်းနေနဲ့ ထိန်းသိမ်းမူ နဲ့ဖြန့်ဝေမူစနစ် တိုးတက်ကောင်းမွန်ရန် မြေအောက်ရေသိုလှောင်ကန်တွေ လုပ်ခြင်း၊ စိမ့်ယိုထွက်နေသောပိုက်များကို အစားထိုး တပ်ဆင်ခြင်း၊ အခြေမှာ မြေကြီးရှိသော တူးမြောင်းများ သွယ်တန်းခြင်း၊ အပင်များလိုသလောက်သာ ရေရရှိဖို့ အမြစ်များသို့ ရေပေးသောစနစ်လုပ်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယနည်းကတော့ ရေသုံးစွဲမူနည်းသော လယ်ယာစနစ် လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားခြင်း ဥပမာအားဖြင့် နည်းစနစ်များဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ အပင်များစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့ မျိုးဗီဇနည်းဖြင့် မွမ်းမံထားတဲ့ ရေခမ်းခြောက်မူဒဏ် ခံနိုင်ပြီး အထွက်နူန်းကောင်းတဲ့ သီးနှံသစ်များကို စိုက်ပျိုးခြင်း။ တတိယနည်းက ပင်လယ်ရေထဲက ဆားတွေထုတ်ပယ်နိုင်တဲ့ နည်းပညာရှိလာဖို့ ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပြီး အဲလိုလုပ်နိုင်ရင် ရေကောင်းရေသန့် ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ပမာဏ ကြီးလာမှာဖြစ်တယ်။ တမူကွဲပြားတဲ့ စတုတ္ထနည်းက ဝယ်လိုအား နဲ့ ရောင်းလိုအား မျှတစေဖို့ ဈေးသတ်မှတ်ပြီး ရေသုံးစွဲသူတွေ အတွက် ရေဈေးကွက် ဖော်ဆောင်ဖို့ပါဘဲ။ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ ဈေးသတ်မှတ်ပြီးသွားရင် ရေအရောင်းအဝယ် ကုန်သွယ်မူကတွန်းအားပေးနိုင်တာက ရေများများရှိတဲ့နိုင်ငံတွေပေမယ့် ရေကိုအကျိုးရှိအောင် သုံးစွဲပြီး ကုန်ပစ္စည်းပိုမိုထွက်အောင် ကျိုးစားကြသလို ရေနည်းခြောက်သွေ့တဲ့ နိုင်ငံတွေဟာလည်း ရေကို အလေအလွင့်နည်းအောင် ချွေတာ သုံးစွဲလာနိုင်ပါတယ်။
နည်းလမ်းလေးသွယ် နဲ့ ပြဿနာကို ပြေလည်အောင် သူ့နေရာနဲ့သူ လိုအပ်သလို လုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး ရေအပို သုံးစွဲနေမူ ပြဿနာကို ချက်ခြင်းရုတ်တရက် လျော့ချရပ်တန့်နိုင်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက နည်းစနစ် အသစ်တွေသုံးပြီး သီးနှံအထွက်ကောင်းအောင်၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း တိုးတက်အောင် လုပ်ကောင်းလုပ်နိုင်ပေမယ့် ခုချိန်ထိ ရေတပေါက်ပိုပေးတိုင်း အထွက်တိုးတဲ့ သီးနှံမျိုး ဘယ်သူမှ မစိုက်နိုင်သေးဘူး။ ထူခြားသာလွန်တဲ့ နည်းစနစ်တွေ မရှိရင်တော့ သီးနှံတွေ ပိုမိုစိုက်ပျိုးရမှာဖြစ်ပြီး အဲလိုစိုက်ပျိုးလို့ ရေကိုလည်း ပိုမိုသုံးစွဲရမှာဖြစ်သလို သီးနှံတွေအစာချေဖျက်မူ ကတဆင့် ရေငွေ့တွေဟာလည်း လေထုထဲကို ရောက်ကုန်ဦးမှာပါ။
ထုတ်လုပ်တဲ့ နည်းပညာက တိုးတက်နေပြီး လုပ်ကိုင်ရတဲ့ ကုန်ကျငွေ လျော့ကျလာလို့ ပင်လယ်ရေငံ ထဲက ဆားတွေထုတ်ပြီး ရေသန့် ရေချိုရအောင် လုပ်တဲ့ နည်းဟာ မျှော်လင့်ချက်ကောင်းပါတယ်။ ခုချိန်ထိတော့ ဈေးကြီးနေဆဲ(အထူးသဖြင့် လျှပ်စစ်အင်အားသုံးစွဲရလို့) ဖြစ်လို့ ကမ္ဘာ့ရေကောင်းရေသန့် သုံးစွဲမူ ရဲ့ ၀.၄% ပဲထုတ်လုပ် ထောက်ပံ့နိုင်ပါသေးတယ်။ အဲဒီနည်းပညာနဲ့ သောက်ရေသန့် လိုအပ်မူကို အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မှာကတော့ သံသယဖြစ်စရာ မရှိသလို အချို့စက်မူလုပ်ငန်းတွေရဲ့ အလွန်သန့်စင်တဲ့ရေ လိုအပ်မူကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားပို့ကုန် အတွက် စိုက်ပျိုးတဲ့ ဈေးကြီးသီးနှံစိုက်ခင်းတွေအတွက်တောင်မှ ရေပေးဝေနိုင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း စိုက်ပျိုးရေးသမား အများစုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ရေအခက်အခဲ ကိုတော့ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။
ဈေးကွက်ဝင်ဖို့ အတွက် ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ အခက်အခဲတွေက သယ်ယူပို့ဆောင်ရန် ခက်ခဲခြင်း၊ တိုင်းထွာရန် ခက်ခဲခြင်း၊ ဈေးသတ်မှတ်ရန် ခက်ခဲခြင်း နဲ့ လူတော်တော်များများ က အခမဲ့ ရသင့်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်း တစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ထားတော့ ငွေတောင်းခံ ဖို့ ခက်ခဲခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေရှားပါးတဲ့ ဒေသတွေမှာ ရေဟာ တပေါက်ဆို ဆိုသလောက် အသုံးဝင်မူတန်ဖိုး ရှိပေမယ့် သူ့ရဲ့ဈေးနူန်းကတော့ ရှားပါးသလောက် ဈေးမကြီးပါဘူး။ တနေ့မှာ ရေပိုင်ဆိုင်ခွင့် ကုန်သွယ်မူဟာ အိန္ဒိယက ၂၀ မီလီယံ တွင်းရေသုံးစွဲသူတွေ အပေါ်သက်ရောက် မူရှိလာနိုင်ပေမယ့် အဲဒီတနေ့ဆိုတဲ့ အချိန်ဟာ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မူအရ ၂၀၂၅ ခုနှစ်မှာ ၁.၄ ဘီလီယံ ရှိလာနိုင်တဲ့ပါးစပ်ပေါက် တွေကို တိုက်နိုင်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ အချိန်ကာလ မဟုတ်သေးပါဘူး။
ရေပြဿနာကို မပြေ ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းရမယ်လို့ ဆိုလာခဲ့ရင် ရေသုံးစွဲမူကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းအားဖြင့်သာ ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ။ ရေသုံးစွဲခြင်း ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမူကို အိန္ဒိယ နဲ့ တရုတ်ပြည် ရဲ့အချို့နေရာတွေမှာ စတင်နေတာက လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးသမား တွေဟာ ရေစုပ်တင်ရာမှာ ရေပမာဏကို ဘယ်လိုတိုင်းတာရမယ် ဆိုတာ လေ့လာရပြီး နောက် အကျိုးရှိအောင်ဘယ်လိုသုံးစွဲရမယ် ဆိုတာ နဲ့ အဲလိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် မြေကြီးအောက်က ရေကို စုပ်ယူထိမ်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ ကျောက်စိုင်ကျောက်ခဲ တွေ မပျက်စီးစေဘဲ အကျိုးရှိပုံ ကိုသင်ယူရတယ်။ လတ်တလော အရေးတကြီး လိုအပ်တာက အဲဒီနည်းပညာတွေကို နိုင်ငံအတွင်းမှာလည်း လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီး အခြားနိုင်ငံတွေဆီလည်း ပြန့်အောင် ဖြန့်ဝေဖို့လိုပါတယ်။
အကယ်၍ ကမ္ဘာမှာ ရေပမာဏ တဖြည်းဖြည်းခြင်း ကုန်ခမ်းနေမူကို ကန့်သတ်နိုင်ခဲ့ရင် တောင်မှ ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အခြား ပြဿနာတွေကတော့ ရှိနေဦးမှာပါ။ လူဦးရေ ၁ ဘီလီယံခန့် ဟာ အတော်အသင့်ကောင်းမွန်တဲ့ရေရရှိသုံးစွဲခွင့်တောင် မရှိ ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီး အချို့လူတွေကတော့ ရေကြီးတဲ့ပြဿနာ၊ ညစ်ပတ်တဲ့ရေပြဿနာ၊ ရေဆိုးမြောင်း စီးဆင်းမူ မကောင်းတဲ့ ပြဿနာ၊ သုံးရေပုံမှန်မရတဲ့ ပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေက အဲဒီပြဿနာတွေကို တကယ် ဖြေရှင်းလိုစိတ်ရှိခဲ့ရင် ပြေလည်သွားအောင် လူတွေကိုယ်တိုင် ပဲ ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ လူတွေဟာ ရေပြဿနာလောက် အရေးမကြီးတဲ့ ပြဿနာအသေးအမွှားလေးတွေကို ရေးကြီးခွင်ကျယ် လုပ်ပြီး အဲဒီ အသေးအမွှား ကိစ္စတွေမှာ ငွေကို ပုံအော သုံးဖို့တော့ တတ်ကြတယ်။ ရေပြဿနာ ကို ပြေလယ်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်ရင်ဖြင့် လူသားတွေ ရင်ဆိုင်ခံစားနေရတဲ့ ရောဂါဘယ ထူပြောမူ ပြဿနာ၊ အငတ်ဘေးပြဿနာ တွေဟာ အလိုလို နည်းပါး သွားမှာပါ။ ကမ္ဘာ့တန်ဖိုး အရှိဆုံး အရာကို ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင် ရေးအတွက် ငွေအင်အားတွေ အကြံဉာဏ်တွေ ပိုမိုရင်းနှီးမြုပ်နှံ တာဟာ တကယ် တန်ဖိုးရှိ အကျိုးကျေးဇူးများပါတယ်။
Posted by ယောနက်သန် at 7:09 PM4comments
တရုတ်နည်း တရုတ်ဟန် ကို ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေ အတုယူမှာကို အနောက်နိုင်ငံတွေ က စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ အဲလို အပြောအဆို စိုးရိမ်မူတွေ ဟာ တရုတ်နိုင်ငံကိုနေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်စေပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံ တာဝန်ရှိသူတွေ ပြောခဲ့တာက ဧပြီ ၃၀ ရက် ရှန်ဟိုင်း(Shanghai) မှာ ပြုလုပ်မယ့် ကမ္ဘာ့ကုန်စည်ပြပွဲ(World Expo) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကို ငွေကုန်ကြေးကျ မများဘဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဘဲလုပ်မယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ပြောသလို မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ မီးရှုးမီးပန်း၊ လေဆာရောင်ခြည်၊ ရေပန်းတွေ နဲ့ အကသမားတွေ ပါဝင်တဲ့ ဖွင့်ပွဲပြကွက်တွေဟာ ငွေကုန်ကြေးကျ အလွန်အကျွံ သုံးစွဲခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဘေဂျင်း အိုလံပစ်(Beijing's Olympic) ဖွင့်ပွဲနဲ့ နင်လား ငါလားပါဘဲ။ အစိုးရ ရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ အညီ တရုတ်တိုးတက်မူအင်အား ကို ထုတ်ဖော်ကြွားဝါ ခဲ့ပြီး သူတို့မှာ စွဲမက်စရာ တွေ ရှိတယ်ဆိုတာ သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ ဆူညံတဲ့ပြကွက်တွေ နဲ့ တရုတ်နည်း တရုတ်ဟန် ဆိုတာကို အရှိန်အဝါမြှင့်တင် ပေးခဲ့ပြီး တကမ္ဘာလုံးက အတုယူအားကျစရာ ဖြစ်တယ်လို့ အတော်များများကို အထင်ရောက်စေခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ပေါင်းမြောက်များစွာ သုံးစွဲခဲ့တဲ့ ကုန်စည်ပြပွဲ နဲ့ တရုတ်နည်း တရုတ်ဟန် ပုံစံကို ထင်ရှားစေခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံကို ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသာမက အခြားနိုင်ငံများကပါ အထင်ကြီးလေးစားခဲ့ကြပါတယ်။ အမေရိကန် က ဆန္ဒကောက်ခံရေး အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Pew သုတေသန ဌာန(Pew Research Centre) ရဲ့ စစ်တမ်းအရ နိုင်ဂျီးရီးယန်း ၈၅% က တရုတ်ကိုအကောင်းမြင်ပါတယ်။ (၂၀၀၈ ခုနှစ်က ၇၉% ပဲရှိခဲ့တာနဲ့ နှိုင်ယှဉ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။) ၂၀၀၈ မှာ အမေရိကန် ၃၉% သာထောက်ခံရာက ၅၀% ထိတိုးလာပါတယ်။ ဂျပန် တွေရဲ့ ထောက်ခံမူနှုံးက ၁၄% ကနေ ၂၆% ထိတက်လာခဲ့ပါတယ်။(အခြားနိုင်ငံများ ရဲ့ နှုံးကို ပုံမှာကြည့်ပါ။) ဒီမိုကရေစီ စနစ်တွေဆီ မှာတော့ အငြင်းအခုန်တွေ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိပေမယ့် သူတို့ဆီမှာ တော့ ငြင်းခုန်မူ မရှိသလောက် နည်းနည်းနဲ့ ရှန်ဟိုင်း(Shanghai) မြို့ရဲ့ အခြေခံ လမ်းပန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ အဆောက်အဦ များကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း နဲ့အတူ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကုန်စည်ပြပွဲတွေတလျောက် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ကုန်စည်ပြပွဲကြီးကို ခင်းကျင်းပြသနိုင်ခြင်း ကြောင့် အရပ်ရပ်က နိုင်ငံတွေရဲ့ အထင်ကြီးမူကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံ က ပညာရှင်တွေ နဲ့ အစိုးရအရာရှိတွေ ကိုယ်တိုင်တောင် အမြင်ကွဲပြားမူတွေ ရှိနေတာက တရုတ်နည်း တရုတ်ဟန်(တနည်းအားဖြင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်က အမေရိကန် အကြံပေးပညာရှင် Joshau Cooper Ramo က ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့တဲ့ ဝါရှင်တန်သဘောတူညီမူကို အင်အားနည်းအောင် လှုပ်ရှားမယ့် ဘေဂျင်းသဘောတူညီမူ) ဆိုတာ ရှိ မရှိ၊ အကယ်၍ရှိခဲ့ရင် တရုတ်နည်း တရုတ်ဟန်ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်သလဲ နဲ့ အဲဒီအကြောင်းကို ဆွေးနွေးလို့ အကျိုးစီးပွား ရှိ မရှိဆိုတာပါ။ အခြားနိုင်ငံတွေ က အတုယူချင်နေတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မူ နည်းနာတွေ မရှိဘဲ နဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရမှာ ကို တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကမလိုလားပါဘူး။ ဟောင်ကောင်(Hong Kong) အခြေစိုက်၊ ပါတီကို ထောက်ခံတဲ့ Ta Kung Pao သတင်းစာ က သူတို့ရဲ့ သတင်းဆောင်းပါးထဲမှာ ကုန်စည်ပြပွဲဟာ တရုတ်နည်း တရုတ်ဟန် နည်းနာတွေကို ခင်းကျင်းပြသတဲ့ နေရာလို့ ရေးသားခဲ့ပြီး အဲဒီ သတင်း အသုံးအနှုန်း ကို အစိုးရတရားဝင် ဝက်ဘဆိုက် တွေကလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကိုးကားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ ပြည်သူတွေကြားမှာ အဲဒီ အသုံးအနှုန်းကို မသုံးမိစေဖို့ အထူးရှောင်ကျဉ်ခဲ့ပြီး ကုန်စည်ပြပွဲကို ဖော်ပြပြောဆိုရာမှာ သိပ်အရေးမကြီးတဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုးနဲ့ သုံးနှုန်းပြောဆိုပါတယ်။
ခုတလော ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြတဲ့ တရုတ်နည်း တရုတ်ဟန်(တစ်ပါတီ အုပ်ချုပ်မူစနစ်၊ နည်းထောင့်ပေါင်း မျိုးစုံကနေ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် ကိုချည်းကပ်ပြီး နိုင်ငံတော်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကတော့ နည်းပေါင်းများစွာထဲ က လွယ်လွယ်ကူကူ တွေ့မြင်သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ နည်းဖြစ်တယ်) နောက် ခြေရာခံလိုက် နေတာ တရုတ်နိုင်ငံ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ နိုဝင်္ဘာလမှာ ပါတီက ဦးစီးလုပ်ကိုင်တဲ့ အထင်ကရပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုက စာမျက်နှာ ၆၃၀ ပါ ထူထဲတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ကို “တရုတ်နည်း တရုတ်ဟန်၊ နှစ်ခြောက်ဆယ်ပြည့် တရုတ်နိုင်ငံ က ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မူ ပုံစံအသစ်” လို့နာမည်ပေးပြီး ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဇန္နဝါရီလ မှာတော့ ကြွားလုံးတွေ သိပ်မပါတဲ့ “တရုတ်နည်း တရုတ်ဟန်၊ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော အတွေ့အကြုံ နှင့် အခက်အခဲများ” ဆိုပြီး တစ်အုပ်ထွက်လာပါတယ်။ အခြားတရုတ်နည်း တရုတ်ဟန် စာအုပ်တစ်အုပ် လည်း ဧပြီလ မှာထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ် အကြောင်းကို ရှန်ဟိုင်း(Shanghai)ကုန်စည်ပြပွဲ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ အတော်လေး အငြင်းအခုန်ဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ကို ရေးတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ စာရေးဆရာတွေထဲမှာ Zhao Qizheng(ပါတီဝါဒဖြန့်ချိရေး ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် လုပ်ခဲ့သူ) နဲ့ John Naisbitt(အမေရိကန်၊ အနာဂါတ်ဟောကိန်းထုတ်သူ) တို့ပါဝင်ပါတယ်။
အနောက်နိုင်ငံ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေး တိုက်တွေကလည်း တရုတ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေး တွေထက် မလျော့သော စိတ်ဝင်စားမူတွေ ရှိခဲ့ရာက ပိုလို့သာ ကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ စာအုပ်ကတော့ အမေရိကန် ပညာရှင် Stefan Halper ရဲ့ “ဘေဂျင်းသဘောတူညီမူ၊ တရုတ်ရဲ့ အလုံးစုံထိန်းကွပ်အုပ်ချုပ်မူ ပုံစံဟာ ၂၁ ရာစုကို ဘယ်လိုများ ဦးဆောင် လွှမ်းမိုးမလဲ” လို့အမည်ရတဲ့ စာအုပ်ပါ။
ရီပတ်ပလီကန် အဖွဲ့အမျိုးမျိုးမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ တဲ့ Mr Halper ရဲ့ဆွေးနွေးချက် က “ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့် ကမ္ဘာကြီးကို ကျဉ်းမြောင်းသွားစေသလို တရုတ်ဟာလည်း အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေကို ကျဉ်းမြောင်းစေတာဟာ” အနာဂါတ်မှာဖြစ်နိုင်ချေ၊တန်ဖိုး ကို တိတ်တဆိတ်လျော့ချသတ်မှတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေသလို အာဏာကိုလည်း ထိမ်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့တရုတ်ပြည် ရဲ့ ခြေအနေက မတူတဲ့ နည်းလမ်းအသစ်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာ ကို ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဆိုင်းဘုတ်ကြီး နဲ့ထောင်ပြနေသလိုဖြစ်နေပေမယ့် တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေကို စိုးမိုးနေတာက(Mr Halper ရဲ့ အပြောအရ) အာဏာကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရမှာ ကြောက်တာ၊ တရုတ်ပြည် ရဲ့ အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျပြီး အခြေအနေတွေ ကသောင်းကနင်း ဖြစ်သွားမှာကိုပါ။ အဲဒီအကြောက် တရားတွေကြောင့်ပဲ သူတို့ဟာ ပြင်ပကမ္ဘာရဲ့ ရိုက်ခတ်မူ ကို စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ဆွေးနွေးချက်တွေအရ ပါတီအုပ်ချုပ်နိုင်မူဟာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မူပေါ်မှာ တည်နေပြီး စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မူကတော့ စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းတဲ့ နိုင်ငံတွေဆီက တင်သွင်းရရှိနေတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေနဲ့ ဆိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အာဖရိကနိုင်ငံတွေက နိုင်ငံရေးသမားတွေ ကတော့ ဘေဂျင်းသဘောတူညီမူ အကြောင်းပြောဆိုတာ မရှိသလောက် နည်းပါးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ တရုတ်ပြည်က စီးဆင်းလာတဲ့ အနောက်တိုင်းပြည်တွေကလို အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး တွေအကြောင်း ဟောပြော ညွှန်ကြားချက်မပါတဲ့ အကူအညီ ငွေတွေကို ချစ်ကြတယ်။
စိုးရိမ် ပူပန်နေမူ တွေကြောင့်ဘဲ တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ တရုတ်နည်း တရုတ်ဟန် အကြောင်းကို စိတ်ပါလက်ပါ မပြောချင်ကြဘူး။ ပြိုင်ဘက် အင်အားကြီးနိုင်ငံ၊ ပြိုင်ဘက်နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ် ထွက်ပေါ်လားခြင်း လို့ အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေမယ့် အပြောအဆို အသုံးအနှုန်း သုံးရင် အမေရိကန်တွေဟာ အထိမခံ ရွှေပန်းကန် ဆိုသလိုဖြစ်ကြမှာကို သူတို့ ကောင်းကောင်းကြီး ရိပ်စားမိကြပြီး အမေရိကန် နဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်ရင် တော့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မူ ပျက်စီးမှာဘဲ။
၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ တရုတ်တာဝန်ရှိသူတွေ ဟာနိုင်ငံအကြောင်းကို “ငြိမ်းချမ်းစွာမြင့်တက်လာခြင်း” လို့ ပြောဆိုရာကနေ လအနည်းငယ် အတွင်းမှာပဲ “မြင့်တက်လာခြင်း” ဆိုတဲ့ အသုံးအနူန်း ကို အမေရိကန်တွေ စိတ်ဆိုးမှာ စိုးရိမ်လို့ မသုံးစွဲတော့ပါဘူး။ အရင်က ဝါဒဖြန့်ချိရေး တာဝန်ယူခဲ့ဖူးတဲ့ Zhao Qizheng ရေးတာက သူ့အနေနဲ့ “တရုတ်ပြည်ရဲ့အခြေအနေ” လို့ သုံးစွဲရတာကို “တရုတ်နည်းတရုတ်ဟန်” လို့ သုံးစွဲရတာထက် ပိုပြီးကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်တဲ့။ ဒီဇင်္ဘာလမှာ ပါတီရဲ့ အကြီးတန်း ဝါဒရေးရာပညာရှင်(Theorist) ဖြစ်သူ Li Junru ပြောခဲ့တာက တရုတ်နည်း တရုတ်ဟန် အကြောင်းပြောဆိုတာဟာ အလွန်အန္တရာယ် ရှိပါတယ်တဲ့၊ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အဲဒီဟာမှာ သာယာကျေနပ်နေခြင်းက နောက်ထပ်လုပ်ရမယ့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမူတွေ လုပ်ဖို့ စိတ်ပါဝင်စား တက်ကြွမူတွေကို ဟန့်တားအားလျော့စေနိုင်ပါတယ်တဲ့။
အဲသလို တကယ်ပဲ ဖြစ်နေခဲ့လို့ အချို့တရုတ်တွေဟာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြပါတယ်။ Deng Xiaoping က နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမူ ကသာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မူ ပုံစံကို ထိန်းကျောင်းပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမူအတွက် လည်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမူ ဆိုတာ မရှိသလောက် ဖြစ်ခဲ့တာ တီရင်မန်(Tiananmen Square) အရေးအခင်းကို သူ နှိမ်နှင်းဖြိုခွင်းတဲ့ ၁၉၈၉ ခုနှစ်ကတည်းပါဘဲ။ အမေရိကန် လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမူ အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Carter Center က Liu Yawei ပြီးခဲ့တဲ့လက ထောက်ပြခဲ့တာ က တရုတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ တရုတ်နည်း တရုတ်ဟန် ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ကို လူသိများအောင် လုပ်ဆောင်တဲ့ လှုပ်ရှားမူဟာ အင်အားကောင်း ကြီးထွားလာခဲ့ပြီး၊ အဲဒါက ဘဲ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမူကို ဘေးရောက်တွန်းပို့ပေးသလိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေ တရုတ်နိုင်ငံကြီး ကသောင်းကနင်း ဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်နေတာ ကိုထောက်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့ဟာ လမ်းကြောင်းမှန် တစ်ခုကိုတွေ့ပြီလို့ ယုံကြည်မူ မရှိသေး တာပါပဲ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မူ ပုံစံအကြောင်း ပြောဆိုဆွေးနွေးကြရင် အားလုံးကို အခက်တွေ့စေတာက တည်ငြိမ်အေးချမ်းမူကို ထိခိုက်စေတယ်လို့ စွပ်စွဲခံရမယ့် အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မူကြောင့် ဖြစ်နေတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမူက စလို့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ခြစားမူတွေ နဲ့ ဆင်းရဲ ချမ်းသာကွာခြားမူ တွေအကြောင်း ဆွေးနွေးကြရမှာမို့ပါ။ တရုတ်ပြည် က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်ပြောဆို တတ်တဲ့ မီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းတွေထဲ ကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Caixin က ဒီတပတ်မှာ အမေရိကန် ပညာရှင် Joseph Nye ရဲ့ ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ Mr Nye က ဘယ်ကိုမှန်း တိတိကျကျ မသိရဘဲ ပြောင်းလဲနေတဲ့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမူ ကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အကြောင်းခြင်းရာ အခြေအနေတွေကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ “မျိုးဆက်ပြောင်းလဲခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိနေခြင်း တွေကြောင့် မကြာခဏဆိုသလို မာန်မာန တွေထောင်လွှားလာတတ်ပြီး နောက်တော့ နှစ်သက်တဲ့ အစားအသောက် တခုကို စားချင်နေသလိုမျိုး အဲဒါကိုဘဲ တမ်းတမ်းစွဲ ဖြစ်လာတတ်တယ်” လို့ သူကပြောပါတယ်။
အနောက်တိုင်း သံတမန် တစ်ဦးက Mr Nye ရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ စကားကို ငှားပြီး ကုန်စည်ပြပွဲကို “ယဉ်ကျေးမူ သိပ္ပံပညာတွေကတဆင့် အရှိန်သြဇာကို ပြိုင်တဲ့ပွဲ” လို့ သတ်မှတ်ပြောဆိုပါတယ်။ တရုတ်ပြည် အကြောင်းရေးသားကြတဲ့ သူတွေ တော်တော်များများ က တရုတ်ပြည်ရဲ့ အရှိန်သြဇာ ဟာကြီးထွားတိုးတက် လာနေပြီး အမေရိကန်ရဲ့ အရှိန်သြဇာ ဟာ ကျဆင်းမှေးမှိန် လာနေပြီလို့ ရေးသားကြပေမယ့် အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့ မှာပြီးဆုံးမယ့် ကုန်စည်ပြပွဲ ကိုကြည့်ပြီး အဲဒီ အဆိုပြုချက် မှန်ကန်ကြောင်း ပြောဘို့ ခက်ပါတယ်။ ကုန်စည်ပြပွဲမှာ နိုင်ငံပေါင်း မြောက်များစွာက ပါဝင်ပြသအောင် တရုတ်နိုင်ငံ ကစည်းရုံးနိုင်ခဲ့တယ် ဆိုတာတော့ အကယ်အမှန်အကန် ပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် ပြပွဲလာကြည့်တဲ့ လူအရေအတွက် က ပြပွဲလုပ်တဲ့ လူအရေအတွက် ထက်အများကြီးဘဲ နည်းနေခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး ပြခန်းတွေထဲ ကိုဝင်ဖို့ စောင့်နေတဲ့ လူတန်းတွေ ကိုယှဉ်ကြည့်ရင် အမေရိကန်ပြခန်း ရှေ့မှာစောင့်နေတဲ့ လူတန်းက အရှည်ဆုံးပါဘဲ။
Posted by ယောနက်သန် at 3:39 PM 1 comments
ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲသည် တကမ္ဘာလုံးကို အရိုက်ခတ်ဆုံး အားကစား ပြိုင်ပွဲဖြစ်သည်။ တခါဖူးမျှ သေချာစွာ မကန်ဘူး သော်လည်း ပွဲကြီးများ ဆိုလျှင် ကြည့်ဖြစ်သည်။ အချို့ ဘောလုံးဝါသနာအိုးများ ကဲ့သို့ ဘောလုံးပွဲသမိုင်း၊ အားကစား သမားများ ရဲ့ သမိုင်းကို သေသေချာချာ မသိပါ။ သို့သော်လည်း ဘောလုံး ဝါသနာအိုးမျာ့း စကားဝိုင်း ဝင်ဆန့် နိုင်ရန် ဟိုတစ်စ၊ သည်တစ်စ သိထားတာလေးနှင့် ကိုယ်အတော်သိလေဟန် ဝင် ဝင်၍လည်း ပြောတတ်ပါသည်။
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) က ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလား ခန့်မှန်းချက် မေးထား သောကြောင့် ကိုယ်ထင်ရာ ကိုပြောလိုက်ပါပြီ။ နှမ်းထွက်တော့ ကိုက်မကိုက် မသိဘူး ကိုအောင်ရေ။
အင်္ဂလန်၊ ဘရာဇီး၊ စပိန်၊ အီတလီ ထဲက တစ်သင်းသင်း ဖလားရမည်ဟုထင်ပါသည်။
အင်္ဂလန် အသင်း ကိုနိုင်စေချင်သည်။ ကစားသမားများ အားလုံးလိုလို ကောင်းကြသည်။ “တော်တော်များများ က သူတို့ရဲ့ prime time ကိုရောက်နေပြီလို့” သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကမှတ်ချက် ပေးသည်။ အချို့က ၃၀ ပတ်ဝန်းကျင် ရောက်နေပြီဖြစ်လို့ နောက်ထပ် ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဝင်ကစားခွင့်ရဖို့ သိပ်မသေချာ တော့ပါ။ မီးကုန် ရမ်းကုန် အစွမ်းပြ ကြိုးစားကစားကြ လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ အထူးသဖြင့် အသင်းရဲ့ မန်နေဂျာ ဖြစ်သူ Fabio Capello ကြောင့်ပို၍ မျှော်လင့်ချက်ထားကြသည် ထင်သည်။ သူဟာ Serie A Title လေးခု နဲ့ European Cup တစ်ခုကို ငါးနှစ်အတွင်းမှာ Milan အသင်းကိုအုပ်ချုပ်စဉ်က ရခဲ့ဖူးပါသတဲ့။ အခြား အီတလီ အသင်းနဲ့ နှစ်ခု၊ စပိန် အသင်းနဲ့ နှစ်ခုလည်း ရဖူးပါတယ်။ သူ့မှာ ရှုံးတယ်ဆိုတဲ့ ဓလေ့စရိုက် မရှိဘဲ သူရဲ့ နည်းပြ ရာဇဝင်ဟာ ဖလားတွေနဲ့ ရွှေရောင်လွှမ်းနေပါတယ်။ သူဟာ စပိန်ဘောလုံး လောကအကြောင်းကိုလည်း နောကျေသူဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလန် အသင်းဟာ အာဂျင်တီးနား နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ တလျောက်မှာလည်း မှတ်တမ်းကောင်းတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘရာဇီး နဲ့ တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ တကယ့်ပွဲကြီး၊ပွဲကောင်း ကြည့်ရမှာပါ။
ဂျာမဏီ၊ အီတလီ နဲ့ ပြင်သစ် အသင်းတွေရဲ့ ဖောင်ကလည်း မကောင်းကြဘူးလို့ပြောကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အီတလီ အသင်းကိုတော့ လျော့မတွက်ရဲဘူး။ ဒီကောင်တွေက အိပဲ့ အိပဲ့ နဲ့တက်လာပြီး ဖလားယူတတ်တယ်။
Rio Ferdinad နာသွားလို့ မကစား နိုင်တာကတော့ တအားလျော့စရာပါ။ ဘရာဇီး နိုင်ငံရဲ့ ဒုတိယ အကြီဆုံး မြိုတော်ရဲ့ နာမည်က Rio de Janeiro ပါ။ ကောင်းတဲ့အသင်းကို နှိမ့်ချပြီး ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ Rio တို့ဒီနှစ်ထွက်ရမယ်လို့ နိမိတ်ကောက်မှထင်တယ်။ :)
Posted by ယောနက်သန် at 11:55 AM4comments
Posted by ယောနက်သန် at 4:51 PM4comments
ဒီနေ့မနက် ထမင်းကြော် ကြော်စားဖြစ်တယ်။ ကြော်နေရင်း ငယ်ငယ်တုန်း က ရွာကိုအလည်သွားရင် မနက်မနက် ထမင်းကြော်စား ရတာ သတိရမိတယ်။ ဒေါ်ကြီး ရဲ့ "ဟဲ့ ကလေးတွေကို ထမင်းကြမ်း လေး လှုံ့ ကြွေးလိုက်ပါဟဲ့" ဆိုတဲ့အသံ ကိုလည်းကြားယောင်မိတယ်။ ညက ကျန်တဲ့ ထမင်း ကို ဟင်းတစ်ခုခု နဲ့ ရော ကြော်တာ ကို လှုံ့ တယ်လို့ပြော ထင်ပါရဲ့။ ဒီလိုဘဲ ထင်မှတ်ထားခဲ့တယ်။
လှုံ့ ဆိုတဲ့ စကားလုံး ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ဆက်တွေးနေမိတယ်။ ကြော်တာကို ပြောတာလား၊ နွှေးတာကို ဆိုလိုတာလား၊ မွှေတာကို လားဆိုတာ ကွဲကွဲပြားပြား မသိဘူး။ အဲဒီ စကားလုံး အသုံးအနှုန်း မကြားရတာ ကြာပြီ။ လှုံ့ နဲ့ လှုံ့ဆော် များ အဓိပ္ပာယ် နှီးနွယ်ပတ်သက် မူရှိလေသလား။
အဘိဓာန် မှာ ရှာကြည့်တော့ လှုံ့(v) exhort, stir လို့တွေ့တယ်။
Posted by ယောနက်သန် at 4:20 PM5comments
Labels: ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာ အတွေးများ, ဘာသာစကား
Posted by ယောနက်သန် at 4:01 PM6comments
ရန်တွေ မကုန်ပါဘူး အမေ
တစ်စစီ ပဲ့။ ။
Posted by ယောနက်သန် at 10:33 PM0comments
မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် ထံမှ စာအုပ်တစ်အုပ် လက်ဆောင်ရပါသည်။ သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီ ဉီးဝင်းတင်၏ ထောင်အတွေ့အကြုံ နှင့် အမြင် များ ကိုစုစည်းထားသေားစာအုပ် ဖြစ်သည်။ ဖတ်အပြီးမှာတော့ အရင်ကလေးစားသည်ထက် လေးစားမိသည်။ အထူးညွှန်းစရာ လိုသည်ဟုမထင်ပါ။ မဖတ်ရသေးသူများ၊ စိတ်ဝင်စားသူများ ထံလက်ဆင့်ကမ်း ချင်မိသည်။ ဒီမှာ ဒေါင်းနိုင်ပါသည်။ ထုတ်ဝေသူ၊ စာရေးသူ ထံမှ ခွင်တောင်း မထားပါ။ ကန့်ကွက်လျှင် ဖြုတ်ပေးပါမည်။
Posted by ယောနက်သန် at 1:10 PM5comments
Labels: စာအုပ်အညွှန်း, မြန်မာပြည်အရေး
Posted by ယောနက်သန် at 1:27 AM5comments
Posted by ယောနက်သန် at 7:25 AM2comments
နှောင် ကြိုး မဲ့စွာဖြင့်
ရိုင်း လိုက်ချင်ဘိ။ ။
Posted by ယောနက်သန် at 5:26 PM3comments
ဆရာစောဝေ ရဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ကဗျာ ကို Naill McDevitt က အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ထားတာပါ။ ခွင့်တောင်းပြီး တင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ တစုံ တယောက် က ကန့်ကွက်ခဲ့ ရင် ဖြုတ်ပေးပါ့မယ်ခင်ဗျား။
As some famous Soviet writer and dissident explained:
Holes in the ground absorb the pains of the pained,
Powerful asaNaypyitaw liquor which gets us pissed
Maddening our brainwaves withacarbon monoxide mist.
Senior citizens in love with starlets and supermodels
Generally are more broken-hearted and troubled
Than the one who's in love with the many, young and
Swaying and laughing and clapping with hands of
Translated by Naill McDevitt
(This poem is coded to spell out ASSHOLE POWER MAD
SENIOR GENERAL THAN SWAY- Shwe in Burmese language)
1) The Russian writer referred to is Ilya Ehrenberg whose novel THE FALL OF
PARIS was translated into Burmese by Mya Than Tint.
2) Naypyitaw is the artificially created capital deep in the interior where Than
Shwe hides out.
3) I interpret the old man in the poem to be Than Shwe himself,a74-year-old
who probably has his pick of glamourous Burmese women.
4) My final two lines present an image ofaBuddhist monk whose love is much
more universal and real and humane than that of the demoralised and dying
Posted by ယောနက်သန် at 7:34 AM 1 comments
အခုတလော ကြည့်ဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေထဲ က ရစ်ချက်ဂီရီ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်တဲ့ Hachiko: A Dog's Story ကား နှစ်သက်မိပါတယ်။ ဂျပန် က ဖြစ်ရပ်မှန် ကို အခြေခံပြီး ရိုိုက်ထားတဲ့ သစ္စာရှိတဲ့ ခွေးလေး Hachiko အကြောင်းပါ။ သူ့ကို ဘူတာရုံမှာ တွေ့လို့ အိမ်ကိုခေါ်သွား၊ နောက်ရက်တွေမှာ ပိုင်ရှင်ကို ရှာပေမယ့် မတွေ့ဘဲဖြစ်နေပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ ဇနီးဖြစ်သူက အိမ်မှာမွေး ဖို့သဘောမကျ ဘဲ ဖြစ်နေပေမယ့် ယောင်္ကျားဖြစ်သူရဲ့ သံယောဇင် ကို ရိပ်မိပြီး အိမ်မှာ မွေးဖြစ်သွားပါတယ်။ Hachiko ဟာ သူ့သခင် အလုပ်သွားရင် ဘူတာရုံထိ လိုက်ပို့ပြီး အလုပ်ပြန်ချိန်မှာ ဘူတာရုံထိ လာကြိုပါတယ်။ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ နေ့စဉ် ပြုကျင့်ဝတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တနေ့ မှာတော့ သူ့သခင် ကွယ်လွန် သွားခဲ့ပြီး အိမ်ကို ပြန်မလာနိုင်တော့ ပေမယ့် သူကတော့ ပြုမြဲ ဝတ္တရားမပျက် သစ္စာရှိစွာနဲ့ ဘူတာရုံမှာ စောင့်ကြိုနေခဲ့ ပါတယ်။ နောက်နေ့တွေ မှာလည်း နေ့စဉ် ဘူတာရုံ ကိုလာပြီး သူ့သခင် ပြန်အလာကို စောင့်မျှော်နေခဲ့တာ သူသေတဲ့ထိ ၉နှစ်လုံးပါပဲ။ သူက ဘူတာရုံ အနီးက လူတွေကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ သံယောဇဉ်၊ စာနာနားလည်မူ နဲ့ ခိုင်မြဲတဲ့သစ္စာရှိမူ တွေအကြောင်း မမေ့စေဖို့ သတိပေးနေခဲ့သလိုပါပဲ။ သူ့ရဲ့ သစ္စာရှိမူကို သတိရနေစေဖို့ အမှတ်တရ ပြုလုပ်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ကြေးရုပ်တုကို ဂျပန်က Shibuya ဘူတာရုံ ရဲ့ရှေ့မှာ တွေ့နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဇာတ်လမ်း အပြည့်အစုံ ကိုတော့ ငွေရောင်ပိတ်ကား ပေါ်မှာ ဆက်လက် ရှုစားကြပါ ခင်ဗျား။
Posted by ယောနက်သန် at 10:12 AM0comments
Tsutomu Yamaguchi (သေရွာက နှစ်ခါပြန်ခဲ့သူ) - ၂
ဒီနေရာအရောက်မှာ သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကို ပြောနေရင်းက ချုပ်တည်း မထားနိုင်တော့လို့ ကြူကြူပါအောင် ငိုပါတော့တယ်။ ဒီလို ငိုနေတာ ပြောပြနေတဲ့ ဇာတ်လမ်း ပြီးပြီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် မဟုတ်ပါဘူး။ Nagasaki ရောက်တော့ မီလောင်ဒဏ်ရာတွေကို ပတ်တီစီးဖို့ မဆိုသာရုံ ခဏကလေးနား၊ ပြီး ချက်ခြင်း ဆိုသလိုပဲ တာဝန်ကျရာ ရုံးကို သတင်းသွား ပို့ပါတယ်။ ဗုန်းတစ်လုံးတည်း အကြဲ ခံရတာနဲ့ Hiroshima မြို့ကြီး ပျက်စီးသွား တယ်ဆိုတာ ကို သူ့ရဲ့ အရာရှိ ဟာ မယုံနိုင်အောင် ပဲဖြစ်နေတယ်။ သူ့ရဲ့အရာရှိ နဲ့ စကားပြော နေစဉ်မှာဘဲ အလွန်စူးရှ တဲ့ အဖြူလိုလို ငွေရောင်လိုလို အလင်းတန်း ကို ပြတင်းပေါက်က တခါ ထပ်မြင်လိုက်ရပြီး မြေပြင် ပေါ်ကို လှဲ အချခံလိုက်ရတယ်။ လှေကားကို ထောက်ပိုးထားတဲ့ စတီးဒေါက် တံ ကြောင့် သူဟာ အသက်ဘေးက လွတ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် စည်းထားတဲ့ ပတ္တီးတွေ ပြုတ်ထွက်ကုန်တယ်။ နောက် ရက်သတ္တပတ် တော်တော်များ တိုင်အောင် သူဟာ ခိုလှုံရာ တဲထဲက အပြင်ကို မထွက်နိုင် ပဲ ဖူးဖူးယောင် နေတဲ့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် တွေကို သေလုမျောပါး ခံခဲ့ရတယ်။ သူ့ရဲ့ အိမ်တခုလုံး ပြိုကျ ပျက်စီး မှတော့ သားနဲ့ဇနီး ကိုလည်း အသက်ရှင်နေဦးမယ် လို့ မမျှော်လင့်တော့ဘူး။ နောက်ပိုင်း ကျောင်းသားလူငယ် လေးတွေက အံ့သြလေးစားစွာ နဲ့ “ဘယ်ဟာ က အဆိုးဆုံး လဲ” လို့ မေးတဲ့ အခါ သူ့ရဲ့ အဖြေက ပြုတ်ထွက်နေတဲ့ လျှာတွေ မျက်လုံးတွေ မဟုတ်ဘူး၊ အလွန်ကြီး တဲ့ အသက်ရှိ လက်အိတ်ကြီး လို တွဲလောင်းကျနေတဲ့ လူတွေ ရဲ့ အရေပြား တွေမဟုတ်ဘူး၊ တစ်ဘက်ကမ်း ရောက်အောင် သူ နင်းကျော်ဖြတ်ခဲ့ တဲ့ တံတားလိုဖြစ်နေတဲ့ အလောင်းတွေပဲ ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။
သူဟာ ဒီအကြောင်း တွေကို အမေရိကန် စာရေးဆရာ Charles Pellegrino နဲ့ လန်ဒန်တိုင်းမစ် သတင်းစာက Richard Lloyd Parry တို့ကို ပြောပြခဲ့တာပါ။ သူ ညူးကလီးယား ဗုန်း ကို ဘာလို့မုန်းတာလဲ ဆိုတာ လူတွေရဲ့ အရှက်၊ သိက္ခာ တန်ဖိုး မဲ့စေလို့ လိုဆိုပါတယ်။ Hiroshima မြို့တွင်းကို ဖြတ်သွားခဲ့စဉ် သူ သတိထားမိတာက လမ်းပေါ်မှာ ယောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေတဲ့ အများစုမှာအဝတ်မရှိတဲ့ လူအုပ်ကြီး နဲ့ အိပ်နေရင်း လမ်းလျှောက် သလို ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေတဲ့ကလေး လေးတွေ။ သူတို့ ဟာ ဘာသံမှ မထွက်ဘူး။ တကယ့်ကို ဘယ်သူ မှ အသံမထွက် နိုင်ရှာကြဘူး။ လူတွေရဲ့ဘဝ လျောကျ သွားပုံတွေက သူဟာ အာလူးစိုက်ခင်း ထဲမှာ ကိုင်ပေါက် ခံလိုက် ရသလို သူတို့ဟာလည်း ဂီတအချက်ပြတုတ်ချောင်းလို၊ လေထဲလွင့်ပါပြီးညိုးရော်သွားရတဲ့ သစ်ရွက်လေးတွေလို၊ ရေမနစ် ဘဲ ပေါလောပေါ်စေဖို့ သုံးရတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေလိုပဲ ဖြစ်သွားတယ်။
အချို့က သူ့ကို သိပ်ကံကောင်းတဲ့လူ လို့ ပြောကြပါတယ်။ နားတစ်ဖက် လေးသွားပြီး ခြေထောက် တွေသိပ်မသန်စွမ်း တော့တဲ့ ဒုက္ခပဲ ခံခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်း မှာတော့ အစာအိမ်ကင်ဆာ ရောဂါ ဖြစ်လာပါတယ်။ သူဟာ ဘာသာပြန်ဆရာ အလုပ် လုပ်ခဲ့တယ်။ နောက် ကျောင်းဆရာ လုပ်တယ်။ နောက်တော့ Mitsubishi မှာပြန်ပြီး အမူထမ်း ခဲ့တယ်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ် မှာ သူရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာထဲကလို သူ့ရဲ့ အတွင်းစိတ်ဟာ ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင် မှု အတိနဲ့ မဟုတ်ခဲ့ဘူး။
ဒီလို ၂၄ နှစ်ကျော်လာသည့်တိုင်။
သူ့ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှား ခံစားမှုတွေကို တန်ကာ(tanka) လို့ခေါ်တဲ့ အသံ ၃၁ သံနဲ့ ရေးဖွဲ့ရတဲ့ ကဗျာတွေရေးခဲ့တယ်။ စိတ်မချမ်းမြေ့ ဖွယ် အတွေ့အကြုံတွေကို ကဗျာတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲ ပစ်တာ ရာပေါင်းများစွာပဲ။ အဲသလို ရေးဖွဲ့နေတဲ့အချိန်မှာတော့ မြေပြင်ပေါ်မှာ အတုံးအရုံး လဲကျသေဆုံး နေတဲ့မြင်ကွင်း ကို အိပ်မက် ထဲက မြင်ကွင်းကို မြင်ယောင်သလို မြင်ယောင်ကောင်း မြင်ယောင် နေမိပါလိမ့်မယ်။ နောက် တစ်ယောက် ပြီး တစ်ယောက် ထ သူ့ကို ကျော်ဖြတ် သွားကြသလိုပေါ့။
ဗုဒ္ဓဘုရား အားလုံးလည်း သေဆုံးသွား
၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ သူ့ရဲ့ ကဗျာတွေကို သူကိုယ်တိုင်ပဲ ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ကဗျာတွေကတဆင့် သူ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံ အမှန်တရား ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် မှာ အသက် ၅၉နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ သူ့ရဲ့သား Katsutoshi ဟာ ငယ်ငယ်က ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဓါတ်ရောင်ခြည်သင့်မူကြောင့် ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ Mr Yamaguchi ဟာ ညူးကလီးယား လက်နက် ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် ညူးကလီးယားလက်နက် ရဲ့ အနိဋ္ဌာရုံ တွေကို ကျောင်းတွေမှာ၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေမှာ၊ အမေရိကန် သမ္မတ Barack Obama ဆီပို့တဲ့စာထဲမှာ ဟောပြောရေးသားရုံသာမက အသက် ၉၀ အရွယ် ကြမှ ပထမဆုံး နိုင်ငံခြားခရီး အဖြစ် နယူးယောက်မြို့ မှာရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ရဲ့ ရှေ့မှောက် အရောက်သွားပြီးလည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
အပြာရောင် ကမ္ဘာကြီလည်း မျိုးတုန်းလိမ့်မည်မထင်။
သူ့ရဲ့ ရွက်ဆောင်မူတွေကြောင့် ဂျပန်အစိုးရက အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ ၁၀၀ကျော်ထဲက သူ့ကို ညူးကလီယား ဗုန်းဒဏ် နှစ်ခါခံရသူ(nijyuu hibakusha) အဖြစ် ပထမဆုံး တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
သူ့ကို သက်သာရာရအောင် နှစ်သိမ့်ပေးတဲ့ အရာ သုံးခုရှိပါတယ်။ ပထမ တစ်ခုက Shikoku ဘုရားကျောင်း က ဗုဒ္ဓပုံတော် ၈၈ ခုရဲ့ သင်္ကန်းရုံပုံတွေ၊ ရောင်ခြည်တော် ကွန့်မြူးနေပုံတွေ၊ မုဒြာပုံတွေကို ကြည်ညိုစွာနဲ့ ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ တန်ကာ(tanka) ကဗျာထဲမှာ ဗုဒ္ဓဆင်တုတော်တွေ မီးလောင်ကျွမ်းပြီး မှောက်ရက် လဲကျနေခဲ့ပေမယ့် ခုတော့ ငြိမ်းချမ်းမူ တဖန် ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယ နှစ်သိမ့်ပေးတာက အရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ သနားကြင်နာ နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာ ပြုမူနေထိုင်ခြင်းပါ။ တတိယ ကတော့ သူ့ဘဝပုံရိပ် ဟာ လက်ဆင့်ကမ်းပြေးပွဲ က တုတ်ချောင်း လို သူ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ဖတ်ရ ကြားရတိုင်းသူတိုင်းက တဆင့်ပြန်လည် လက်ဆင့်ကမ်းကြတာပါ။ အဲဒီ လက်ဆင့်ကမ်း ခဲ့တဲ့ တုတ်ချောင်းတွေကို စုပေါင်း လိုက်ရင် နောက်ထပ် လူဖောင်ကြီး(Human Raft) တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
Posted by ယောနက်သန် at 12:43 PM3comments
Tsutomu Yamaguchi (သေရွာက နှစ်ခါပြန်ခဲ့သူ)
ဇန္နဝါရီ ၄ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ် မှာ ကွယ်လွန် သွားရှာပြီဖြစ်တဲ့ Tsutomu Yamaguchi ရဲ့အကြောင်း ကို ဘာသာပြန်ထားတာ ပါ။ အားလုံးတင်ပြီးရင် မူရင်း Link တင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျား။
ညူးကလီးယားဗုန်းဒဏ် နှစ်ခုလုံး မှ လွတ်မြောက်လာခဲ့သူ အသက် ၉၃နှစ် ရှိပြီဖြစ်သော ဆူတိုမူရာမဂူချီ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၌ကွယ်လွန်။
ဝမ်းနည်းစွာ ငိုကြွေးအပြီးမှာ Tsutomu Yamaguchi က ဘာကြောင့် သူ့ရဲ့ ကဗျာစာအုပ်ကို “လူဖောင်ကြီး”(The Human Raft) လို့ အမည်ပေးခဲ့သလဲဆိုတာ ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ နေ့တစ်နေ့မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်နေ ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့က အလုပ်ကို သူ့နာမည်ကဒ်ပြား ယူခဲ့ဖို့မေ့ခဲ့တယ်၊ ဆင်းနေကျ ကားမှတ်တိုင် မှာ ဆင်းရမယ်။ အဲဒီမနက်မှာ သူ့အတွက် လုပ်စရာတွေက အစီအရီ။ Mitsubishi သင်္ဘောကျင်းမှာ အင်ဂျင်နီယာ အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့် တာဝန်ချိန်သုံးလပြည့်လို့ Hiroshima ကနေပြောင်းရတော့မယ်။ အဲဒီအတွက် အထုပ်အပိုးတွေ ပြင်ရမယ်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် မိတ်ဆွေတွေကို နုတ်ဆက်ရမယ်။ ပြီးရင်တော့ ချစ်ဇနီး Hisako နဲ့ သားလေး Katsutoshi ရှိရာ မိုင်နှစ်ရာကျော်ဝေးတဲ့ Nagasaki ကို မီးရထား နဲ့ခရီးဆက်ရဦးမယ်။ သူဆင်းရမယ့် မှတ်တိုင်ရောက်တော့ အနည်းငယ် စိတ်လှုပ်ရှား နေတယ်။ အလုပ်ကိုရောက်ဖို့ ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အာလူးစိုက်ခင်းကို ဖြတ်ပြီး နာရီဝက်လောက် လမ်းလျှောက်ရဦးမယ်။ မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီနေ့ဟာ သြဂုတ်လရဲ့ သာယာလှပတဲ့ နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပြီး ကောင်းကင်ဟာကြည်လင်နေသလို သူ့ရဲ့စိတ်ဟာ လန်းဆန်းတက်ကြွနေတယ်။ ရှေ့ဆက်ဖြစ်မယ့် အကြောင်းဟာ စာဖတ်သူတွေအတွက်တော့ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက် ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ခံစားသိ သိပေမယ့် သူကတော့အဲဒီလို သိမနေခဲ့ဘူး။ သူသတိထားမိတာက လေယာဉ်တစ်စီးဟာ ဝဲလှည့်ပျံသန်းနေတယ်၊ ပြီးတော့ လေထီးနှစ်စင်း အောက်ကိုကျဆင်းနေတာ မြင်ရတယ်။
အဲဒီနောက် သူသိလိုက်တာက အဖြူလိုလို ငွေရောင်လိုလို မီးတန်းကြီး၊ ပြီးတော့ ဧရာမ မီးတောက် မီးလျှံကြီး။ မီတောက်ကြီး က ကြီးလွန်းတော့ မီးအလုံးကြီး လို့ ထင်ရပါတယ်တဲ့။ အဲလို သိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာဘဲ သူဟာ မြေပြင်ပေါ်ကို ပြားပြားဝပ် မှောက်ချလိုက်တယ်။ မီးလုံးကြီး က မီးတောက် မီးလျှံတွေဟာ အရှိန်တညီးညီး နဲ့ တောက်လောင်နေပြီး ပူလိုက်တာဟာ လည်းအလွန့်အလွန်ဘဲ။ အဲဒီ အပူရှိန် နဲ့ ပေါက်ကွဲတဲ့ အလျင် ကြောင့် ပထမတော့ သူ့ကို ဆွဲလိုက်သလို ခံစားရပြီး၊ နောက် သူ့ကို တွန်းထုတ်လိုက်တယ်။ ဘာမှလည်း မမြင်ရဘူး။ သူဟာ အာလူးစိုက်ခင်းထဲက ရွှံ့တောထဲမှာ မှောက်လျက် ရှိနေတုန်း။ သူဝပ်နေတဲ့ နေရာဟာ ဧရာမ ပေါက်ကွဲမူကြီး ဖြစ်တဲ့နေရာ နဲ့ နှစ်မိုင်လောက် ဝေးပါတယ်။ အဲဒီနေရာ ထိအောင်ကို အဝတ်တွေ၊ စက္ကူစာရွက်တွေ၊ မီးလောင်နေတဲ့ အပိုင်းအစတွေ ကျနေတာဟာ မိုးရွာချသလိုပဲ။ သူ့ ခန္ဓာကိုယ် အပေါ်ပိုင်း နဲ့ မျက်နှာတချမ်း လုံး ဆိုးဆိုးရွားရွား မီးလောင်ခံရတယ်။ ဆံပင် တွေလည်း မရှိတော့ဘူး။ နားစည် လည်းကွဲသွားတယ်။ အဲသလို ဖြစ်နေတာတောင် အဲဒီနေ့မှာ သူလုပ်ရမယ်လို့ ရည်မှန်းထားတဲ့ ခရီးသွားဖို့ အတွက် မီးရထား ရဖို့ မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေတဲ့ ဘူတာရုံ ရှိရာ မြို့ထဲကို သွားဖို့ ခရီးကို နောက်ပြန်လှည့်ခဲ့တယ်။ မြစ်ကိုဖြတ်ကူးရမယ့် တံတား တွေမရှိတော့ဘူး ကျိုးကျနေပြီ။ မြစ်ပြင် တစ်ခုလုံး အပြည့်နီးပါး ပေါလောပေါ် မျောပါနေတွေက မိန်းမ၊ ယောင်္ကျား၊ ကလေး၊ လူကြီး တွေရဲ့ မီးသွေးခဲ လိုဖြစ်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွေ။ မှောက်လျက် အနေအထား တွေနဲ့ မျောပါနေတော့ သစ်သားပြင်ကြီး လိုပဲတဲ့။ အဲဒီ မီးသွေးတုံး အလောင်းတွေပေါ်ကနေ တချို့နေရာတွေမှာ ဖြတ်လျှောက်၊ တချို့နေရာတွေမှာ လှေလိုလုပ်လှော် ပြီး တဖက်ကမ်း ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ မီးသွေးတုံး အလောင်းကောင် တွေဟာ သူ့ရဲ့ လူဖောင်ကြီးပါပဲ။
Posted by ယောနက်သန် at 12:38 PM 1 comments
နေရောင်ခြည်များကြောင့် ထိုနေ့က ရာသီဥတု သည် ပူပူနွေးနွေး ကြည်ကြည်လင်လင် နှင့် သာသာယာယာ ရှိလှသည်။ အိမ်သို့ အလည်လာသော ဧည့်သည်များနှင့် အတူ ကျွန်ုပ်သည် ဗျစ်ရည်ကိုစုပ်ရင်း ရောက်တတ်ရာရာ စကားများကို ဝိုင်းဖွဲ့ပြောဆိုနေကြသည်။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ကတော့ တခုခုကို ကြော်လှော်ဖို့ ပြင်ဆင်ရင်း တချက်တချက် ဝင်ကာပြောသည်။
ကျနော်သည် စကားကို သိုင်းသိုင်းဝိုင်းဝိုင်း ဖွဲ့နွဲ့ပြောလေ့မရှိပဲ၊ လို တို ရှင်း ပြောလိုသူ ဖြစ်သည်။ ကြော်လှော်နေသော မိတ်ဆွေကမူ တခုခုအကြောင်း ပြောလျှင် ဗာရာဏသီချဲ့ ပြောတတ်သူဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ရောက်တတ်ရာရာ ပြောနေရင်းဖြင့် ဧည့်သည်များက မိတ်ဆွေအား ဘာကြော်နေတာလဲ ဟုမေးကြသည်။
မိတ်ဆွေကြော်နေသည်မှာ “တော်တီးလာ” ဟုအမည်ရသော စပိန်ကြက်ဥကြော်ဖြစ်သည်။ ကျနော့် အလိုအတိုင်းဆိုလျှင် နာမည်ကို ချက်ခြင်း ပြောလိုက်မိပြီး၊ ကြက်ဥကြော် ဟုနာမည်ကြားပြီး ဘယ်သူကမှစိတ်ဝင်တစား ထပ်မေးတော့မည်မဟုတ်။ မိတ်ဆွေကမူ နာမည်ကို ချက်ခြင်းမပြော။ ဟင်း စတင် ပေါက်ဖွားရာ နိုင်ငံသည် စပိန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုနိုင်ငံတွင် အစားများသောဟင်းတခုဖြစ်ကြောင်း၊ ဘယ်၍ဘယ်ပုံကြော်ရကြောင်း၊ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ချဲ့၍်ပြောသည်။ ဧည့်သည်များမှာလည်း နားထောင် ရင်း မိတ်ဆွေ၏ဟင်းကို စိတ်ဝင်စားလာကြသည်။ ထိုင်ပြီးနားထောင်နေရာက ထကြည့်ကြတဲ့ အဆင့်ထိဖြစ်လာပြီး၊ ကြော်နေရာ မီးဖိုနံဘေး ရောက်ကုန်ကြသည်။ ဝိုင်းမှာတော့ ကျနော် တယောက်တည်း တိတ်ဆိတ်စွာ ဗျစ်ရည် ကိုစုပ်ရင်း ကျန်ခဲ့တော့သည်။
Posted by ယောနက်သန် at 11:58 AM3comments
Posted by ယောနက်သန် at 3:21 PM0comments